Melana noMoya kwiLilebhile 'Isitimela esingaphantsi komhlaba' Njenge-Trauma Porn - Tv
Melana noMoya kwiLilebhile 'Isitimela esingaphantsi komhlaba' Njenge-Trauma Porn
Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba Ulandela abantu ababini abangamakhoboka, uCora noKesare, bashenxiswa ebukhobokeni kumasimi aseGeorgia kwaye babetha emantla baya kwinkululeko kwindlela ehamba phambili edlula eCarolinas. Umgcini wamakhoboka uRidgeway kunye nomncedisi wakhe omncinci, oMnyama, uHomer, balandela uCora noKesare ngokuzingisa okunyanzelekileyo kunye nokuzinikela-nokuba, ewe, umntu obamba amakhoboka ngobuchule. Nangona elandela amanye amakhoboka, naye, uRidgeway akazukuphumla ade arhuqe uKesare noCora babuyele esihogweni.
mlb isitovu esishushu 2018
Olu luhlu lucebisa enye imbali yobukhoboka kunye nokwahlulwa e-U.S. Umzekelo, iNorth Carolina yakhetha ukugqilaza abantu baseIreland kunye nokuthintela abantu abaNtsundu ngokupheleleyo ukuze kugcinwe ubunyulu bukarhulumente, ngoko ke nokufunyanwa kwenkululeko e-North Carolina kuthetha ukufa okuthile. Amazwe kwi Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba nganye imele izigaba ezahlukileyo zokwahlulwa-hlulwa e-U.S. yokwenyani, ke uCora noKesare bakhwela imizila yembali yase-US ukusuka kwisigaba se-antebellum ngokuwa koKwakha ngokutsha. Ukuphela kwekhredithi kwisiqendu ngasinye kujikeleza ulwazi lwembali yombukeli phambili ngeendlela zomculo zangoku; Iibhombu ngaphezulu kweBaghdad, Runnin ', Le yiMelika, njl.Umlawuli uBarry Jenkins akakho krwada. Akayinciphisi inkqubela phambili yezopolitiko ukusuka kwixesha elidlulileyo ukuza kuthi ga ngoku. Endaweni yoko, Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba Ulahla ubuhlanga njengesiponji esibaleka sabaleka kwimbali, mhlawumbi ngokungenammiselo.
UMoya kaBarry Jenkins ‘oololiwe bangaphantsi komhlaba’
Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba , ethathwe kwinoveli yokuphumelela amabhaso kaColson Whitehead, wadibana noloyiko nangaphambi kokuba ikhutshwe eAmazon. Icandelo lokuphawula kwifayile ye- uluhlu ye Inkqubo ye- Ngaphantsi koololiwe ibamba izikhalazo ezininzi eziqhelekileyo malunga nokungachani kwembali yomboniso, ubundlobongela bayo obubonakalayo, kunye nokufaneleka kwayo kwisithethe esikhulu samabali malunga nobukhoboka base-US kwaye, xa sithetha ngokubanzi, umothuko omnyama. Cinga ukuba, Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba Icinga kwakhona uthungelwano oludumileyo lokubhangisa njengolomgaqo wendlela ohamba phantsi komhlaba ongaphantsi komhlaba, onikwa iinkonzo zobugqi kwaye uboniswe kulungelelwaniso lukamabonakude ngesimbo esithandekayo se-anime ekusebenzeni kwayo. Kusondele kakhulu ukuba kungenzeki nakubani na obukele uthotho ukuba adibane Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba kwaye Iingcambu .
Kodwa uqinisekile: Ibizwa ngokuba ngu-Underground Railroad, yidrama yexesha, kwaye inazo zonke izinxibo, ii-aksenti, kunye nenkohlakalo onokuthi ulindele ukuyibona kule projekthi. Ikwanomsebenzi wokuthwebula wekhamera, abalinganiswa abakhulu, intsebenzo engummangaliso, ukubalisa amabali okucingayo, kunye nenqaku elihle. Ngaphandle koko, Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba Unengxaki yokucaphuka okuthile kwiipokotho zabaphulaphuli bakhe. Ubukhoboka bufutshane kwiminyaka engama-250 yembali yesizwe; Kwaye ngeenjongo ezimangalisayo, ubukhoboka buye bathetha uluhlu olucekeceke kakhulu lweetropiki kunye neengxoxo ezilungelelaniswe nethoni ye-sepia ye-dreary. Nkqu I-Antebellum , ngecebo laso elihlekisayo, ayikwazanga kushukumisa i-vibe yesabelo somsebenzi wasekhaya. Amabali malunga nokwenzakala okuMnyama ngaphaya kobukhoboka andisa iitropu kodwa nokudinwa. Bona , I-hyper-stylized to a error, yandithumela kwindawo ebambekayo. Kodwa ingxaki nge I-Antebellum yayingebobukhoboka, kwaye ingxaki nge Bona yayingenguye umothuko omnyama. Ingxaki kwezi projekthi yayikukuba zazizothe. Ingxaki ngeyona projekthi imbi kakhulu kulo naluphi na uhlobo kunqabile ukuba ibe sisifundo, kwaye phantse ihlala iyindlela.
iingoma eziphezulu ezingama-20 zedrake
Akukho kunqongophala kohlobo lweentlobo ngendlela yolonwabo oluMnyama. Akukho mntu unyanzela nabani na ukuba azinkcinkce ngokubonisa ukonzakala kwabantu abamnyama. Umnqweno wokubabukela ukhutshiwe ngaphandle komnqweno wokubenza. UWhitehead ngumbhali omkhulu oMnyama, uJenkins ngumlawuli onamandla omnyama, kwaye iAmazon Studios sisazela esimhlophe esithambileyo ngoku esifuna umxholo omnyama. Uva iingxelo zohlobo oluthile lokubala ngokobuhlanga, kufuneka uqale ukuthatha abantu abaMnyama ngokungathí sina, kwaye yintoni eyona nto imbi ngaphezu kobukhoboka kunye nokwenzakala kwabaMnyama? Kodwa umothuko omnyama ukwenzeka ukuba ibe yinto eqhumayo, ephazanyiswa yeyona nto iphambili kunye notyalo-mali abanye abaye balufuna ngokungakhathali. Ke ngoku sikwicandelo lamagqabantshintshi eenkonzo ezinkulu ezinempikiswano malunga nokufaneleka kwesiqinisekiso sorhwebo esiqhelekileyo sokubizwa ngokuba ngamava abaMnyama. Yinto engaqhelekanga ukuxoxa, iyaqondakala kwinqanaba elithile kodwa iphinde yoyikise xa usithathela ingqalelo imiba enzulu yezentlalo. Ingxaki ayikufumani umothuko omnyama kulonwabo oludumileyo. Ingxaki kukufumana ukuzithemba kwalapho. Awusoze wonwabe.
Ngamandla onke, Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba Uyachasa ukuhlelwa koononophala. Ilusizi, kwaye inobundlobongela, kodwa ikwayinto engaguquguqukiyo-ngokuphandle- fun ukucinga. U-Cora uza kuphumelela njani ukusinda kule yure izayo, kwaye e-US angayifumana phi inkululeko yokugqibela? Kwaye yintoni ingxaki yeRidgeway? Inomdla ngokwaneleyo ukuba ubuze isahlulo esibanzi sembali yase-U.Sananigans kodwa uqeqeshwe ngokwaneleyo (ngokungafaniyo I-Antebellum okanye Bona ukwenza okulungileyo ngabalinganiswa bayo. Imbali inomdla ukuba uyayivumela. Ingcamango yobukhoboka be-chattel yayicace gca nangokucacileyo ngengqondo, ukanti loo logic yanyusa yaza yathatha i-hemispheres ezintathu. Ubungakanani bomntu kunye nokuthanda imeko enjalo yemicimbi, eyamiselwa ikota yemileniyam, ayizange nje inyuke isithuba xa wonke umntu edibene noFrederick Douglass kunye namaQuaker.
Ubukhoboka baseChattel buye bahlaziya kaninzi kwiinkulungwane ezininzi kwaye bathabathela inxaxheba kwiindlela ezahlukeneyo zokukholisa, kwaye akukho nalinye inyathelo elibalulekileyo elichithe iziseko zophuhliso, ingqiqo kunye nesibheno. Yaya phi intando yezopolitiko yobukhoboka? Ngaba ucinga ukuba kulula kuwo wonke umntu ukuba aqiniseke ukuba ihambile ngokupheleleyo kwaye akaze aphinde abuyele inzala yakhe? Yimfihlakalo enkulu, eyoyikekayo leyo Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba ibeka malunga nokupheliswa kobukhoboka e-U.S .: Yintoni etshintshileyo, yintoni engazange yenziwe, phi, ngoba, kwaye uqinisekile? I-US ayizange iqulunqe inkohlakalo yomntu kodwa ukusekwa kwayo kwabangela ukungqubana okukhulu kwimithetho yayo yenkululeko nobukhoboka. Oko kungqubana kunemibono emininzi engenasiphelo eluntwini nakwidemokhrasi. Kodwa ngoku amaqhezu amaninzi kwezopolitiko zangoku acinga ukuba alungile kakhulu kule mibuzo malunga nembali yase-U.S, nokuba kungenxa yokuba sele bebukele Ubuhlobo kwaye ngoku badiniwe okanye ngenxa yokuba beqinisekile ukuba nabani na onomdla wokuxoxa ngobukhoboka kweli nqanaba uzama ukuthubelezisa ithiyori yomdyarho obalulekileyo kwibhokisi yesidlo sasemini.
indlu party kid n ukudlala
Ukuba intlekele yokuziphatha kwibali lethu lemvelaphi yesizwe ayikuthandi kwinqanaba elithile, kwanasemva kwayo yonke le minyaka, ke ingqondo yakho ivaliwe. Kodwa ndifumana inqanaba elithile lokuhlambalaza ngesihloko, ndiyayenza. Ikratshi lijika libe kukuzikhusela. Ukungxamiseka kuguqula ukudinwa. Kunzima ukusibona ngokulula kwaye sihlala sincitshiswa saba lusizi, sinee-stooges ezinxibileyo, sinxibe ilaphu le-beige okanye asinanto kwaphela, kumdlalo ofanayo wokuziphatha okudala. Kodwa akufuneki ukuba ibe yimidlalo efanayo yokuziphatha yakudala. Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba Kuthatha iintlungu ezinkulu ukuphinda uvuselele imbali ngobubi benoveli ngelixa ugcina eyinyani, isiseko se-enigma. Ayisiyoxinzelelo yomnyama. Ayiyiyo nembali yase-U.S., Ehlaziyiweyo ngokucacileyo Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba . Yindalo yomntu nendima yayo egwenxa ekuyileni unyango olungummangaliso. Kwaye siyintoni ngoku? Izithandi zobulumko? Ngubani na kuthi ukuba sibonile kwaye saqonda ngokwaneleyo?
Iicawa ezingama-90 zonqulo lweeklasikhi
Isikolo samabanga aphakamileyo Iimuvi ezinomxholo
Ukuhlangula umtshato ka-jon taffer
iwotshi esebenza ngefilimu eorenji
IJedi enombane weorenji
chicago iinkunzi zenkomo phambi kweofisi